Free Thinker: အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ၊ မဟုတ်တာလုပ်နေသော ကျွန်ုပ်
အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ၊ မဟုတ်တာလုပ်နေသော ကျွန်ုပ်
ကျွန်တော်၏ စတုတ္ထမြောက်စာအုပ်ဖြစ်သော “တာယာအန္တရာယ်ကင်းဝေးရေး” ပြီးသွားသဖြင့် လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများ အကြောင်းကို ဆက်လက်ရေးသားပါသည်။ ယခင်စာအုပ်များရေးစဉ်က လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ရှာရတာ မခဲယဉ်းလှ။ ကျွန်တော်လိုချင်သောအချက်များကို Google search engine တွင် ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံမျှနှင့် များပြားလှစွာသော အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် များမြောင်လှသော အချက်အလက်များကို မလိုချင်သည့်အဆုံး ရခဲ့ပါသည်။ သည်တော့ ရေးရတာအလွန် အဆင်ပြေလှသည်။
သို့သော် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သုံး စက်များအကြောင်းတော့ အင်တာနက်တွင် သိပ်မတွေ့ရလှပါ။ အဲလေ လုံးဝ မတွေ့ပါဟုဆိုလျှင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်။ တွေ့ရသည်များမှာ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်တော့ စက်မှုလယ်ယာလုပ်နေတာ ဘယ်သို့ရှိ သည်။ မည်သည့်စက်များကို မည်ကဲ့သို့သုံးနေသည် စသည်တို့မျှလောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သည်ဟာတွေမှာ ကျွန်တော့် အတွက် အသုံးမတည့်လှပါ။ ကျွန်တော်လိုချင်သည်က လက်တွန်းထွန်စက်အကြောင်း ပုံများနှင့်တကွ အပြည့်အစုံရေးထား တာ၊ ထယ်များ၊ ထွန်များ၊ မျိုးစေ့ချကိရိယာ၊ ပေါင်းနှိမ်နှင်းရေးကိရိယာ၊ မြေညှိစက်၊ စပါးချွေလှေ့စက်၊ ရိတ်သိမ်းစက်၊ အခြောက်ခံစက် စသည်တို့အကြောင်း စက်များတည်ဆောက်ပုံ၊ ပြင်ဆင်ပုံ၊ ထိန်းသိမ်းပုံ၊ အသုံးချပုံ၊ ချိန်ညှိပုံ စသဖြင့် အပြည့်အစုံ ရေးထားတာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် စိုးစဉ်းမျှ မတွေ့ပါ။
စင်ကာပူမှ စာအုပ်ဆိုင်များတွင်လည်း လိုက်ရှာကြည့်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် စင်ကာပူမှာ ဘုန်းကြီးနှင့်ဘီး ကဲ့သို့ဖြစ်၍ ကျွန်တော်လိုချင်သော စာအုပ်မရခဲ့ပါ။ စင်ကာပူမှ Kinokuniya စာအုပ်ဆိုင်ကြီးမှာ မည်မျှကြီးသနည်းဟူမူ ၀င်ပြီးလျှင် ၀င်ခဲ့သည့်အပေါက်မှ ပြန်ထွက်ဘို့ကို မနည်းလိုက်ရှာယူရသော စာအုပ်ဆိုင်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤထောင်ပေါင်းများစွာသော စာအုပ်တို့အကြား လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာနှင့် ပတ်သက်သောစာအုပ် တစ်အုပ်မှမရှိပါ။
အင်တာနက်တွင် တရုတ်က လက်တွန်းထွန်စက်များကြော်ငြာထားတာ တွေ့ပါသည်။ ထွန်စက်နှင့်ပတ်သက်သည့် Technical Specification အနည်းအကျဉ်းမျှ ဖော်ပြထားပါသည်။ အသုံးမတည့်လှပါ။ အိန္ဒိယ၊ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ် စသည်တို့တွင် လယ်ယာများတွင် ထွန်စက်ကြီးများဖြင့် မည်ကဲ့သို့ထွန်ယက်နေသည်၊ ယခင်က စပါးခြွေရာတွင် မည်ကဲ့သို့သော စက်များကိုသုံးခဲ့သည် စသည်တို့ရိုက်ပြထားသော ဗီဒီယိုကလစ်များကို Youtube တွင် တွေ့ပါသည်။ အတော်များပါ၏။ ကျွန်တော်လည်း ရနိုင်တတ်သရွေ့ အားလုံးကို download လုပ်ထားလိုက်ပါသည်။ ဗမာပြည် ပြန်ရောက်လျှင် ကျွန်တော်တို့ဆီက လယ်သမားများကို ပြချင်၍ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်သမားများကိုစုကာ projector နှင့်ပြမှာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤဗီဒီယိုများသည် ကျွန်တော်ရေးမည့်စာအုပ်အတွက်မူ အထောက်အကူမဖြစ်ပါ။
ယခုပြောချင်သည်မှာ သည်အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါက အချီးဖြစ်ပါ၏။ အငြိမ့်ထွက်ကာနီး လူပြက်များရှေ့က ထွက်ကာ ခွန်းထောက်သဖြန်များရွတ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဇာတ်လမ်းမှာဤကစခြင်း ဖြစ်သဖြင့် သူ့အကြောင်း မပြောလို့မရ။ ဒါမှ ဇာတ်ရည်လည်မည်။
ယခုပြောမှာက အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလျှင် ကျကျနန၊ သေသေသပ်သပ်၊ စေတနာပါပါလေး လုပ်ဖို့အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းစေချင်သော စေတနာဖြင့်ဖြစ်ပါ၏။ အပြစ်တင်တာ၊ အတင်းပြောတာ၊ တဖက်သတ် မကောင်းမြင်နေတာ မဟုတ်ပါကြောင်း ဦးစွာပြောလိုပါသည်။ ကျွန်တော်သည်လိုရေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်၊ ပြုပြင်လာလိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်ရဲပါ။ မိတ်ဆွေများကို သိစေလိုသဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြင်လို့ရနိုင်လျှင်လည်း ပြင်ရန် အကြံပေးနိုင်လျှင် ပေးဘို့ရန် အတွက်သော်လည်းကောင်း အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာကာ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ရေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သို့အတွက်ကြောင့်လည်း ခေါင်းစဉ်ကို “အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ၊ မဟုတ်တာလုပ်နေသော ကျွန်ုပ်” ဟု ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
သည်အကြောင်းနှင့်ခပ်ဆင်ဆင် ယခင်က တစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်
တွင် ဖတ်နိုင်ပါ၏။ အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီး ဟု အမည်ပေးထားပါသည်။
အသေးစားလယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများအကြောင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် ညပေါင်းများစွာ လိုက်လံ ရှာဖွေရင်းက မြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ၊ စာစောင်များ၊ သုတေသနစာတမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်၊ သုတေသန စာတမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်၊ စာစောင်စာတမ်းများ အများအပြားတွေ့ရှိ ရယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဘေးထွက် အကျိုး အမြတ်ဖြစ်ပါ၏။ (ဤအထဲမှ တစ်ခုမှာ Rice Knowledge Bank မှ ရသော စပါးနှင့်ပတ်သက်သည့် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။)
ရှာရင်းရှာရင်းနှင့် မြန်မာပြည်မှ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန website ကို သွားတွေ့ပါသည်။ တစ်ခုမှာ အဟောင်း (ရန်ကုန်) ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ အသစ် (နေပြည်တော်) ဖြစ်ပါ၏။ အဟောင်းတွင် အင်္ဂလိပ်လိုရေးထား ပြီး အသစ်တွင် မြန်မာလိုရေးထားပါသည်။ ရေးထားသော font မှာ myanmar3 ဟု တွေ့ပါသည်။ မြန်မာလိုဖတ်လိုသူများ font ကို ဦးစွာ install လုပ်ပြီးမှ ဖတ်လို့ရပါမည်။
အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသော website အဟောင်းတွင် သိပ်ပြောစရာမရှိ။ သို့သော် မြန်မာလိုရေးထားသော နေပြည်တော် website ကမူ အတော်လေး အားနည်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မိတ်ဆွေများ ၀င်လည်ကြည့်လျှင် တွေ့ပါလိမ့် မည်။ (စိုက်ပျိုးရေးသမားများ ကတော့ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန website ကို သိကောင်းသိပါလိမ့်မည်။)
ပထမ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ထားသည်မှာ စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းမျှ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက် အခြား စာမျက်နှာများသို့ သွားကြည့်သည်။ Plant Protection မှ ဓါတ်ပုံများမှာ အလွန်ညံ့ဖျင်းလှ၏။ ကျွန်တော့်ကို ဤအကောင်ပလောင်များ၏ နာမည်ကို အင်္ဂလိပ်လိုပေးပါခင်ဗျား။ အလွန်အင်မတန် အရည်အသွေး ကောင်းလှသော ပုံများကို ကျွန်တော်ရှာပေးပါမည်။ ဤအင်းဆက်ပိုးကောင်များကို သားရဲကောင်ဟု ဘာသာပြန်ထားတာကတော့ ဖတ်လို့အဆင်မပြေပါ။ အခြား အပင်ရောဂါများမှ ဓါတ်ပုံများမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ဖြစ်ပါသည်။
Agricultural Technology ဟု ဆိုပြီး လက်ကမ်းစာစောင်ကလေး ၇ ခုမျှ pdf ဖိုင်နှင့်တင်ထားခြင်းမှာလည်း “သည်မနက် ငါကိုယ်တော်မြတ် ထမင်းရေကို ဘုဉ်းပေးသုံးဆောင်တော်မူလိုက်သည်” ဟု ဆိုသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ အခြား CARTC, VFRDC, SEEDS, LAND USE, STATISTICS, FLORICULTURE, LOCAL/FOREIGN PROJECTS စသော page များတွင်လည်း မထူးပါ။ မြန်မာပြည်တွင် မည်သည့်အရပ်များ၌ မည်ကဲ့သို့သော မြေအမျိုးအစားများ ရှိသနည်းဟု သိလိုသဖြင့် land use မှမြေပုံများကို download လုပ်ကာ ဖွင့်ကြည့်ပါသည်။ ပုံများ၏ resolution မှာ အလွန်နိမ့်ရကား ပြတ်ပြတ်သားသား မမြင်ရ။ တင်ထားသောပုံများမှာလည်း လေးငါးပုံမျှ မဖြစ်ညစ်ကျယ် ဖြစ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံ မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်က စက်မှုလယ်ယာကို စလုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် ဧရာဝတီတိုင်းမှ စမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့အတွက် ဧရာဝတီ တိုင်းမှ မြေအမျိုးအစားများကို သေသေချာချာ သိထားဘို့လိုသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်လိုချင်သည့် မြေပုံမတွေ့ပါ။ ကြေးတိုင် နှင့်မြေစာရင်းတွင်လည်း ကြည့်လိုက်ပါဦး။ သုံးလို့စားလို့မရသော စာသားအနည်းငယ်မှလွဲ၍ ဘာမှမရှိပါ။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန မှာမူ ၀င်လို့ကိုမရပါ။
ပြောရမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော့်ဆီတွင် သူတို့တင်ထားသော statistics ထက်ပိုမိုပြည့်စုံသော အချက်အလက်များ ရှိပါ သည်။ ကျွန်တော့်တွင် FAO, UNDP, ADB, CIA Worldfacts Book, IRRI စသည့် website ပေါင်းများစွာမှ များပြားလှသော ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို စုဆောင်းထားတာ စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်စာမျှပင် ရှိပါသည်။ ငါတို့ဆီလည်း ရှိပါတယ်ကွ။ နိုင်ငံရေးအရ တင်လို့မရလို့ တင်မထားတာ ဆိုလျှင်တော့လည်း မပြောတတ်ပါ။
Floriculture ဆိုတာကိုလည်း ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ပီဘိ ရယ်စရာကလေးဖြစ်ပါ၏။
၁၅-၃-၂၀၁၁ နေ့က ကျွန်တော့် PR ကဒ်၊ Re-entry Permit သက်တမ်းကုန်တော့မှာမို့လို့ (အများနားလည်အောင် ပြောရလျှင် PR သက်တမ်းကို ၅ နှစ်သာ ပေးထားပါသည်။ ၅ နှစ်ပြည့်လျှင် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးရပါသည်။) သက်တမ်း ထပ်တိုးပါသည်။ ညဘက် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်မှစာကြည့်စားပွဲတွင် ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပြူတာမှနေ၍ စင်ကာပူ လ.၀.က အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ၀င်ကာ လိုအပ်သော အချက်အလက်များဖြည့်၏။ ထိုအခါ သက်တမ်းတိုးခ တစ်နှစ်လျှင် ၁၀ နှုံးနှင့် ၅ နှစ်စာ ပိုက်ဆံ ၅၀ တောင်းပါသည်။ ကျွန်တော့်တွင် အဆင်သင့်ရှိပြီးသား အင်တာနက်ဘဏ်စာရင်းမှ ငွေ ၅၀ ကို လ.၀.က အကောင့်တွင်း လွဲပြီးသည်၏ ခဏ၌ပင် နောက်ထပ် ၅ နှစ်အတွက် approval letter ထုတ်ပေးပါတော့၏။ ကွန်ပြူတာကို စဖွင့်သည်မှ approval letter ကို print out ထုတ်ပြီးသည်ထိ ၁၅ မိနစ်မျှပင် မကြာပါ။
(နည်းနည်းထပ်ဆောင်းပြောရလျှင် အိမ်လခ၊ ရေမီး၊ ဖုံးဘိုး၊ အင်တာနက်ဘိုး၊ အခွန်ဆောင်တာ၊ ဘာညာကွိကွ ပေးစရာများကို Bank GIRO ဖြင့်ပေးလို့ရသည်။ မည်သည့် Bill စာရွက်မှမလို။ သည်လ မည်မျှကျသည်ကို တယ်လီဖုံး message ပို့သည်။ အီးမေးဖြင့် အကြောင်းကြားသည်။ ကိုယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ လကုန်လျှင် မိမိအကောင့်အတွင်းမှ အလိုလို ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါသည်။ သည်အကြောင်း ကျွန်တော်၏ “အနာဂတ်တစ်ခု ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်း” တွင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ မြန်မာပြည်၌ မီတာခဆောင်ခြင်းသည် မည်မျှဒုက္ခများကြောင်း ကိုယ်တိုင်သွား ဆောင်ဖူးသူများ သိပါသည်။)
ကျွန်တော်ရန်ကုန်တွင်ရှိခိုက် ၈-၂-၂၀၁၁ နေ့တွင် အမျိုးသမီး ပတ်စ်ပို့သက်တမ်းတိုးတာ သွားထုတ်ပါသည်။ မနက် ၉ နာရီခွဲတွင် တစ်ခေါက်သွား၏။ စာအုပ်ကို ညနေမှ ထုတ်ပေးမည်၊ ညနေ ၄ နာရီတွင် ပြန်လာပါဆိုကာ ဖြတ်ပိုင်းကလေး ပေးလိုက်ပါသည်။ ထိုဖြတ်ပိုင်းရဘို့ပင် ၁ နာရီခွဲခန့် တန်းစီစောင့်ရပါသည်။ ညနေ ၃ နာရီခွဲခန့်တွင် ကျွန်တော်တို့ ပန်းဆိုးတန်း ပတ်စ်ပို့ရုံးသို့ လာကာတန်းစီပြန်ပါ၏။ ၅ နာရီတီးခါနီးမှ စာအုပ်ရပါသည်။ ထိုနေ့တစ်နေ့လုံး ထို ပတ်စ်ပို့စာအုပ်ထုတ်တာနှင့်ပင် အချိန်ကုန်သွားပါသည်။ ထို့အပြင် စိတ်ပင်ပန်းတာလည်း အဆစ် ပါပါသေး၏။ ငါ့နာမယ်ခေါ်တော့မလား၊ ငါ့နာမည်များ ကျော်သွားပြီလား ဟု စိတ်တစောစောနှင့် ဖြစ်၏။ ကျွန်တော် ဒီလောက်ရေးပြစရာတောင် မလိုပါ။ မိတ်ဆွေများလည်း သည်အတွေ့အကြုံမျိုး ကောင်းကောင်းကြုံဖူးမည် ဖြစ်ပါသည်။
စင်ကာပူပတ်စ်ပို့ကို အင်တာနက်မှလျှောက်ပြီး စာတိုက်တွင် ထုတ်လို့ရသည်။ လ.၀.ကရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်သွားစရာ မလိုပါ ဆိုလျှင် စင်ကာပူအတွေ့အကြုံ မရှိသေးသော မြန်မာပြည်မှ မိတ်ဆွေများ အံ့သြနေမည်လား မသိပါ။ အကယ်တန်တု၊ အင်တာနက်မှလျှောက်လျှင် ပတ်စ်ပို့လျှောက်ခ ၇၀ မျှသာ ကျသင့်မည်ဖြစ်သော်လည်း လူကိုယ်တိုင်သွားလျှောက်လျှင် ၈၀ ပေးရပါသည်။ ပိုပြီးဈေးကြီးပါ၏။ အချိန်လည်းကုန်သည်။ တန်းလည်းစီရမည်။ စာရွက်စာတမ်းတစ်ထပ်ကြီးလည်း ပေးရမည်။
(ဟားဟား၊ ခင်ဗျား မသိလို့ပါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း လူကိုယ်တိုင်မသွားဘဲ လုပ်လို့ရပါသဗျ။ ခင်ဗျားလို ကွန်ပြူတာကြီးတောင် ဖွင့်နေစရာမလိုပါဘူး ဟု အချို့က အဓွန့်တက်ကောင်းတက်ပါလိမ့်မည်။)
ရေမရောသော မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်ဖြစ်သည့် ကျွန်တော် ကိုယ့်မွေးရပ်ဌာနေဖြစ်သော အမိမြန်မာပြည်သို့ ကိုယ့်မိဘ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်တွေ့ရန် ပြန်သည့်အခိုက် မြန်မာပြည်ဝင်ဘို့အရေး white card ဆိုတာ ဖြည့်ရသည်။ အခွန် ကြေငြာစာရွက် ဖြည့်ရသည်။ လေဆိပ်ရောက်တော့ တစ်ခါ ဘာဆိုလည်း လျှောက်လွှာစာရွက်အကြီးကြီးကို တစ်ခါထပ်ဖြည့် ရသည်။ နောက်ပြီး လုပ်ငန်းချောမွေ့စွာလည်ပတ်ရေးအတွက် ချောဆီ ငွေ ၁၀ ဘိုးလောက် ထိုးပေးရသည်။
သို့သော် ကျွန်တော် စင်ကာပူပြန်ဝင်သည့်အခါတွင်မူ ဘာစာရွက် (ဘာစာရွက်ဆိုဘာစာရွက်ကမှ) ဖြည့်စရာမလိုပါ။ လ.၀.က သို့ IC ကဒ် ပြလိုက်သည်။ ပတ်စ်ပို့စာအုပ်ပြလိုက်သည်။ ဒါပါဘဲ။ ဘာမှမေးနေစရာမလို။ ဘာမှ ဖြေစရာစကားမရှိ။ စာအုပ်ထဲတွင်လည်း ဘာတုံးမှမထုပေးလိုက်။ ကျွန်တော့်စာအုပ်ထဲတွင်ရှိသော တံဆိပ်တုံးများမှာ မြန်မာပြည် အ၀င်အထွက် တုံးများသာဖြစ်ပါသည်။ စင်ကာပူလ.၀.က တုံးများမရှိ။ သူတို့က တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပြုထားသူ ဖြစ်သည့်အတွက် ဘာမှထပ် ဖြည့်စွက်နေစရာမလို။ သည် IC ကဒ်ဖြင့်ပင် လုံလောက်သည်ဟု ယူဆခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ပြောလိုသည်မှာ သည်မှ အင်တာနက် website များ၏ အကျိုးကျေးဇူးနှင့် မြန်မာပြည်မှ အင်တာနက်ဆိုဒ်များ မည်မျှကွာပုံကို ပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထားပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံအခြေအနေနှင့်မို့ သူတို့လောက် မလုပ်နိုင်တာ အပြစ်ဆိုစရာ မရှိပါ။ သို့သော် လုပ်ထားသည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာ ကလေးကိုတော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျကျနနကလေးလုပ်ဖို့ မကောင်းပါလား ခင်ဗျား။
နမူနာတစ်ခု ထပ်ပြပါရစေ။ ကျွန်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ စိုက်ပျိုးရေးသမားမဟုတ်သည့် သာမန်ပြည်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဘာတွေလုပ်နေသည်ကို သေသေချာချာ သိလိုသည်။ မြန်မာပြည်တွင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေသော သီးနှံများအကြောင်း သိလိုသည်၊ လေ့လာလိုပါသည်ဆိုလျှင် ဘယ်သွားရှာရမည်နည်း။ ယခု အနေအထားအရ ရှာစရာနေရာမရှိပါ။ သည်အချက်အလက်များကို မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပေးထားဘို့ကောင်းသည် ထင်ပါသည်။
ကျွန်တော် လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများအကြောင်း ရေးမည်ဆိုတော့ စက်မှုလယ်ယာဌာန ဘာတွေလုပ်နေသည်။ ထွန်စက်မည်မျှရှိသည်။ မည်သည့်ဒေသများတွင် ထွန်စက်ကြီး၊ လက်တွန်းထွန်စက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနေသည်။ ထိုစက်များကို မည်သည့်နိုင်ငံများမှ တင်သွင်းသည်။ စက်မှုလယ်ယာ စက်ရုံများမှ မည်ကဲ့သို့သော လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ ထုတ်နေသည်ကို သိချင်၍ လိုက်ရှာပါသည်။ မတွေ့ပါခင်ဗျာ။
မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အင်တာနက် စာမျက်နှာ http://www.moai.gov.mm/ တွင် ၀င်ကြည့်ပါသည်။ Survey Department, Myanmar Agricultural Development Bank, Water Resources Utilization Department, Settlement and Land Records Department, Myanmar Agriculture Service ဌာနများသို့သာ ၀င်လို့ရသည်။ အခြားဌာနများမှာ နာမည်သာရှိပြီး အင်တာနက်လင့်ခ် မရှိ။ သို့အတွက် ကျွန်တော်သိချင်တာ သိခွင့်မရ။
ကျွန်တော့်သားကို စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် တက်စေလိုသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် များ သိလိုသည်။ ထိုတက္ကသိုလ်တွင် မည်သည့်ဌာနများရှိပြီး မည်သည့်ဘာသာရပ်များ ပို့ချနေသည်။ ယခုဆိုလျှင် ကျောင်းခွဲ ၇ ကျောင်းရှိသဖြင့် ထိုကျောင်းများ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိပြီး မည်သည့်ဘာသာရပ်များ ပို့ချနေသည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးက မည်သူဖြစ်သည်။ ဆရာဆရာမနှင့် ကျောင်းသားအချိုး မည်မျှရှိသည်။ မည်သည့် facilities များရှိသည်။ ၀င်ခွင့်ရရန် မည်သည့် အရည်အချင်းများရှိရမည်။ Carrier opportunity မည်သို့ရှိသည်။ ဤကျောင်းဆက်တက်ပြီး နိုင်ငံတကာ ပညာရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ မျှော်မှန်းနိုင်သည်။ မည်သည့် တက္ကသိုလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မည်ကဲ့သို့သော စကောလားရှစ်များ ရနိုင်သည် စသည်တို့ကို မည်သည့်နေရာတွင် သွား လေ့လာရပါမည်နည်း။ စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်နှင့် ပတ်သက်သော website တစ်ခုတော့ ရှိပါသည်။ အထက်တွင်ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သော ကမ္ဘာအေး၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနဟောင်း website မှ link တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် စိုက်တက္ကသိုလ်၏ profile ကလေးကို အကျဉ်းမျှ ဖော်ပြထားခြင်းသာဖြစ်၍ အားကိုးလို့မရပါ။
စင်ကာပူမှ (မြန်မာပြည် စိုက်ပျိုးရေး အ.ထ.က အဆင့်မျှရှိသည့်) Institute of Technical Education ကျောင်းများ ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ ကို နမူနာ ကြည့်ပါ။ သူတို့လုပ်ထားတာလေး အတုခိုးလို့ရပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် နည်းပညာအားနည်းမှန်း၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တိုင်းလည်း လုပ်လို့မရမှန်း ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းသိပါ သည်။ သို့သော် အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနအဆင့် website တစ်ခုလုပ်ထားပုံအားဖြင့်တော့ ရှက်စရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
သူများတွေ ဘယ်သူလုပ်လုပ်၊ မလုပ်လုပ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံကြီးများမှ မဟာဘွဲ့၊ ဒေါက်တာဘွဲ့များ ယူလာခဲ့ သော ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ စိုက်ပျိုးရေး ပညာရှင်များကိုတော့ လုပ်ပေးစေလိုသော ဆန္ဒရှိပါသည်ခင်ဗျား။ စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ရများအသင်း ရှိသည်ထင်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုထောင်ပြီး အလုပ်ရှုပ်သဖြင့် အခြား စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ မပေးနိုင်လျှင်သော်မှ အနည်းဆုံး စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်နှင့်ပတ်သက်သည့် information အပြည့်အစုံကို ပေးစေချင်ပါသည်။
ဒု ပါမောက္ခချုပ်ဖြစ်သော ဆရာ ဒေါက်တာဦးမျိုးကြွယ် အား လှပကုံလုံ ပြည့်စုံသော စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် website တစ်ခုဖြစ်လာစေရေးအတွက် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရင်းနှီးမှုကို အခွင့်ကောင်းယူလျှက်) တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ဆရာ ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်မှန်း ကျွန်တော်သိပါသည်။ သို့သော် ဆရာ အလွန်အလုပ်ရှုပ်မည် ဟုလည်း ခန့်မှန်းလို့ရပါသည်။ ဆရာက လိုအပ်သော သတင်း အချက်အလက်များပေး၊ နိုင်ငံခြားရောက်နေသော ဆရာ့တပည့်များကို အကူအညီတောင်းကာ လုပ်ခိုင်းလျှင် ဖြစ်နိုင်မည် ထင်ပါသည်။ (ကိုယ့်ဟာကိုယ် အေးအေးမနေနိုင်ဘူး။ ငါတို့လာ ပြဿနာရှာတယ် ဟု နိုင်ငံခြားရောက် မိတ်ဆွေများက မေတ္တာပို့လျှင်လည်း ခံရမည်သာဖြစ်ပါ၏။)
ဖြစ်စေလိုသော စေတနာအားဖြင့် အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာကာ ရေးလိုက်ပါသည်။
လွန်တာရှိလျှင် ၀န္ဒာမိပါ ခင်ဗျား။
Posted by အေးငြိမ်း at 3:47 PM
Carry On... Keep it up !
We should try for our country as we can.
ခရစ္စတိုဖာ ပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၅)
ယုန်သူငယ် ၊ပညာ၏တန်ဖိုး နှင့် ကာလာမသုတ်